Ndepụta ụlọ ọgwụ na ụlọ ọrụ | Ngwọta OMG
Ndepụta nke ụlọ ọgwụ na ụlọ ọrụ
Ndị na-esonụ bụ ndepụta nke ụlọ ọgwụ na ụlọ ọgwụ na Singapore. A na-ahazi ya dịka edemede ndị a:
Ụlọọgwụ Ọgwụgwụ - nye nnukwu nlekọta ahụike, yana ụlọ ọrụ ahụike zuru oke, ndị ọkachamara n'ụlọ na ndị ọrụ nkwado.
Ụlọ Ọgwụ na Ahụhụ Specialists - inye ọgwụgwọ ọkachamara na nlekọta ahụ ike. Ndị a na-agụnye ụlọ ọgwụ na ụlọ ndị ọkachamara onwe ha ọkachamara n'ụlọ ọgwụ na ndị dọkịta.
Ụlọ ọgwụ obodo - ndị a na-abụkarị ụlọ ọgwụ ọha na eze na-eri nri, nlekọta geriatric na ndị ọrịa coalescing. Ndị ọrụ ebere ma ọ bụ òtù okpukpe na-akwụkarị ha ụgwọ, site n'enyemaka nke ego gọọmentị na / ma ọ bụ ọkachamara na ahụ ike ọha na eze.
Ndepụta nke Ụlọ Ọgwụ General
Ụlọ ọgwụ Ọgwụ Changi (CGH)
Ụlọ ọgwụ Ọgwụ Changi (CGH) bụ ụlọ ọrụ nkwonkwo ụlọ ọrụ nkwonkwo (Joint Commission International (JCI) nke na-enye nlekọta nnukwu na ọkachamara. Ụlọ ọgwụ anyị na ahụike ọkachamara na-enye ọtụtụ ụdị ọgwụgwọ na ịwa ahụ nke gụnyere Otolaryngology, Dermatology, Ophthalmology and Endocrinology.
Ụlọ ọgwụ Gleneagles
Lelọ ọgwụ Gleneagles bụ ụlọ ọgwụ na-ahụkarị 272-bed na-enye ọtụtụ ọrụ ahụike na ịwa ahụ maka njikwa ngụkọta nke ndị ọrịa. Ọpụrụiche Gleneagles gụnyere Cardiology, Gastroenterology, Transplant Liver, Obstetrics & Gynecology, Oncology and Orthopedics. Ike Gleneagles 'dị ike na-adabere na ndidi ya, ọrụ enyi na enyi, nlekọta mma, ọkachamara ọkachamara na teknụzụ egosipụtara. Gleneagles kwadoro na Joint Commission International (JCI), onye ndu ụwa iji meziwanye ahụike, na 2006 ma nyeghachi ya na 2009.
Ụlọ Ọgwụ Health na Jurong
JurongHealth bụ ọhụụ ọhụụ ọhụrụ nke ọha na eze ka a kwalite iji kwado ọrụ na ọrụ nlekọta na ụlọ ọgwụ na n'ofe obodo, iji mee ka mkpa nlekọta ahụike dị na West nke Singapore. JurongHealth na-achọ inye nlekọta na ebe dịka mmeghachi omume, Convalescent, nyocha na nlekọta Geriatric, ndị ọkachamara na ndị ọkachamara.
Ụlọ Ọgwụ Alvernia
Ugwu Alvernia bụ ụlọ ọgwụ 303-bed n'ozuzu ụlọ ọgwụ na-ahụ maka ikike ahụike na ụlọ ọgwụ abụọ. Ụlọ ọgwụ na-akwado ndị dọkịta na-akwado 1,000, yana gbasara ndị ọkachamara 100 dabeere na ụlọ akwụkwọ.
Ụlọ Ọgwụ National University (NUH)
Ụlọ Ọgwụ National University bụ ụlọ ọgwụ kachasị elu na isi ụlọ ọrụ nlekọta maka nlekọta ahụike, ịgwọ ọrịa na ahụike na nkwonkwo, gụnyere ọrịa Katọlik, Gastroenterology na Hepatology, Obstetrics na Gynecology, Oncology, Ophthalmology, Pediatrics, Orthopedic Surgery and Hand and Reconstructive Microsurgery. Ụlọ ọgwụ ahụ na-enyekwa ndị okenye (usoro akụrụ, imeju na pancreas) na ọ bụ nanị ụlọ ọgwụ ọha na eze na Singapore iji nye usoro akụrụngwa ụmụaka na imeju umeji.
Tel: (65) 6779 5555 (24-Hr) Faksị: (65) 6779 5678
N'ụlọ Hospital General Teng Fong
Ụlọ ọgwụ General Teng Fong, ụlọ ọgwụ nke 700-bed bụ nnukwu ụlọ ọgwụ, ga-ejikọta ya na ụlọ ọgwụ na-elekọta 400-bed maka inyekọta nlekọta zuru oke. N'ịbụ ndị e mepụtara ka ha mepee site na 2014, ụlọ ọgwụ abụọ a ga-abụ akụkụ dị mkpa nke Ngalaba Nlekọta Obodo Jurong Lakeside, na-enwe ike ịnweta ọrụ ụgbọelu (Jurong East MRT Station, Jurong East Bus Inthangehange) na ụlọ ahịa na ntụrụndụ.
Tel: + 65 6472 2000 Fax: + 65 6379 4330
Ụlọ ọgwụ dị na Parkway East (Ụlọ Ọgwụ East East)
N'ịbụ onye a maara dịka Hospital nke East Shore, Parkway East Hospital bụ ụlọ ọgwụ na-elekọta ụlọ ọgwụ 106-bed, nke nwere ụlọ ọrụ ọkachamara na-ahụ maka ọganihu dị n'ebe ọwụwa anyanwụ Singapore na-enye ọtụtụ ụlọ ọgwụ na ahụike. Ndị otu ọkachamara nke ndị ọkachamara n'ịgwọ ahụike na-ahụ anya hụ na ndị ọrịa na-enweta ogo nlekọta anya.
Ụlọ ọgwụ Raffles
Ụlọ ọrụ Raffles na-enye ndị ọkachamara ọrụ ndị ọkachamara na nkà mmụta sayensị dị elu. Ụlọ ọrụ ọkachamara nke 21 na-ezute ụdị ọrịa dịgasị iche iche dịka obstetrics na gynecology, cardiology, oncology and thethopedics.
Tel: (65) 6311 1111 Faksị: (65) 6311 2136
Ụlọọgwụ General Singapore (SGH)
Generallọ Ọgwụ Singapore General (SGH) bụ ụlọ ọgwụ mbụ na kacha ukwuu na Singapore. Ọ na-enye nlekọta dị ọnụ ala maka ndị ọrịa, ọzụzụ maka ndị dọkịta na ndị ọkachamara ahụike ọzọ, ma na-eme nyocha iji weta nlekọta ndị ka mma nye ndị ọrịa ya. GHlọ ọrụ Joint Commission International kwadoro SGH ka ọ na-agbaso ụkpụrụ nchekwa na ogo na ahụike.
Ụzọ nke Outram Singapore 169608
Tel: 6222 3322 Faksị: 6224 9221
TTSH bụ otu n'ime ụlọ ọgwụ kachasị ukwuu nke Singapore nke nwere afọ 170 maka nlekọta ahụike na ọganihu. Ụlọ ọgwụ nwere Ụlọ ọrụ ahụike 40 na ngalaba ahụ ike, ndị ọkachamara 16 ma kwadoro ya karịa ndị na-arụ ọrụ ahụike 7,000. TTSH na-ahụ ndị ọrịa 2,000 n'ụlọ ọgwụ yana ndị ọrịa 460 na ngalaba mberede ya kwa ụbọchị.
Tel: (65) 6256 6011 Faksị: (65) 6252 7282
Ndepụta nke ụlọ ọgwụ ndị obodo
Mo Mo Kio-Thye Hua Kwan Hospital Ltd
Yelọ ọgwụ Thye Hua Kwan (AMK - THKH) bụ onye na - eweta nlekọta mgbake na Singapore. Ebumnuche iji zụlite ndị ọrịa anyị ka ha nwee ike ịdabere na onwe ha ma nyere ha aka na ntinye ha na ọha mmadụ. THKH nwere ihe ọmụma na nka na usoro ọzụzụ ahụike dị iche iche iji nye ndị ọrịa anyị nlekọta kachasị mma maka mgbake.
Ụlọ Ọhụụ Na-ahụ Maka Ọhụụ
Ụlọ Ọgwụ Na-ahụ Maka Ọhụụ Bright (BVH) bụ ụlọ ọgwụ na-elekọta ụlọ 318 nke na-enye ọrụ nlekọta na ọrụ ogologo oge maka ihe gbasara 1200 ndị ọrịa ọhụrụ n'afọ. BVH na-enye ọrụ nlekọta maka ndị na-arịa ọrịa, ndị na-agwọ ọrịa, ndị na-arịa ọrịa na-adịghị ala ala. Ụlọ ọgwụ ahụ na-ejekwa ozi dị ka ụlọ ọrụ ọzụzụ na agụmakwụkwọ maka ndị ọkachamara na ndị na-elekọta obodo na-elekọta ndị agadi na ndị na-adịghị ike.
5 Na Na Na Singapore 547530
Tel: (65) 62485755 Faksị: (65) 68813872
Kwong Wai Shiu Hospital na Ụlọ Nursing
Hospitallọ ọgwụ Kwong Wai Shiu na-etu ọnụ akwa 350 gbasaa na ngalaba 6-acre. Nke ndị ọrụ 300 zụrụ azụ na ndị ọkachamara na-arụ ọrụ, Ngalaba Na-ahụ Maka Ahụ Ike (IPD), Relọ Ọrụ Mweghachi na Chineselọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọgwụ Na-ahụ Maka Ọgwụ (TCM) na-elekọta ọtụtụ puku ndị ọrịa kwa ọnwa.
Tel: 6299 3747 Faksị: 6299 2406
Nchekwa ogologo oge Ren Ci (Hougang)
Nlekọta Ogologo Oge Ren Ren na-elekọta ndị ọrịa na-arịa ọrịa na-arịa ọrịa nkwarụ siri ike, ogologo oge na ọrịa na-enweghị atụ. Otu ụlọ ọgwụ ahụ na-enyekwa ndị bi n'ụlọ na-elekọta ahụike na ndị nọọsụ na mpaghara ikike North-West Community Development Council.
Blk 9, Ọkwa 1, 10 Buangkok View Singapore 539747
Ụlọ Ọgwụ Obodo Ren Ci
Ụlọ ọgwụ Ren Ci na-enye ọgwụgwọ na-akwụ ụgwọ, ọrụ nlekota na nlekọta ọrụ nlekọta maka ndị obodo. Ijere mmadụ ozi n'agbanyeghị agbụrụ, agbụrụ na okpukpere chi, onye na-elekọta ndị na-elekọta ndị na-elekọta mmadụ na-enweta ozi ọma na-adabere n'ụkpụrụ nke obiọma na ọmịiko.
Ụlọ Nọọsụ Ren Ci
Cilọ Nursing Ren Ci nwere ikike nke 212 akwa ugbu a na ọchịchọ maka akwa na Ren Ci Nursing Home dị oke elu, na-anọchikarị ọnụego obibi zuru oke.
N'ikwekọ na mbọ gọọmentị na-akwadebe Singapore maka ndị na-acha awọ, atụmatụ mmeba ugbu a maka Nlọ Nọọsụ iji bulie ikike ya. A na-atụ anya na ụlọ obibi ndị nọọsụ Ren Ci ga-aga ebe obibi ọhụrụ na Bukit Batok n'ọdịnihu dị nso.
Andrewlọ Ọgwụ Obodo Andrew (SACH)
SACH na-elekwasị anya n'inye ndị okenye na ụmụaka nlekọta ndị na-agwọ ọrịa na nlekọta na-edozi ahụ mgbe nnukwu ọgwụgwọ gasịrị n'ụlọ ọgwụ. Na mgbakwunye na ọrụ nlekọta anyị, SACH na-arụ ọrụ Ụlọ Ọrụ Nchịkwa Ụbọchị, ụlọ ọgwụ ndị na-ahụ maka ụlọ, ọrụ nlekọta ụlọ, ọrụ nlekọta obodo na ụlọọgwụ na-enye ndị nlekọta na-enweghị isi maka obodo-na-mkpa.
Ụlọ Ọgwụ St. Luke
Lukelọ Ọgwụ St Luke na-achọ ịbụ ụlọ ọgwụ obodo na-eduga na-enye ahụike, nọọsụ na nlekọta ahụike maka ndị nọ ná mkpa, ndị agadi na-esighi ike na ndị ọrịa. Ha na-agbasi mbọ ike inye ndị ọrịa ha obi ụtọ, nke na-enye ọgwụgwọ na ọgwụgwọ nke ga-eme ka nlekọta mgbake ha dịkwuo mma. Lukelọ Ọgwụ St Luke na-enye ọrụ na akụrụngwa gụnyere ngalaba 10 nwere akwa 233 nke nhazi dị iche iche, ọrụ nyocha ụlọ nyocha enyere site na Alexandra Hospital Clinical Laborator na nyocha Clinics maka nnabata Inpatient na Outpatient Services
Ndepụta nke italslọ Ọgwụ Ọkachamara & itlọ Ọrụ
Adam Road Medical Center (nke mbụ Hospital Adam Road)
Adam Road Medical Center (ARMC) bụ ụlọ ọrụ ahụike psychiatric onwe ya raara onwe ya nye iji gbochie ma gwọọ ahụike uche na-akwalite ahụike uche. ARMC na-enye ntule na ọgwụgwọ maka ụdị nsogbu ahụike dị iche iche gụnyere nsogbu ịda mbà n'obi, nchegbu, na mmetụta uche metụtara ọnọdụ ahụike maka afọ niile. Ọrụ nyere gụnyere Onwe psychotherapy, Ngwọta ọgwụ, Nyocha nke uche na uche na Hypnotherapy
Institute Of Healthental Mental (IMH) (Ụlọ Ọgwụ Woodbridge mbụ)
Ụlọ Ahụike nke Ahụike bụ ụlọ ọgwụ na mbụ na Singapore, nke na-enye usoro nlezianya nke nlezianya, nlezianya na ndụmọdụ maka ụmụaka, ndị na-eto eto, ndị okenye, na ndị agadi. IMH nwere ihe owuwu nke oge a, yana ngalaba 50 maka ndị na-agwọ ọrịa na Specialist Outpatient Clinics. Ọ bụkwa ụlọ ọrụ nlekọta ahụike mbụ na Asia iji nweta Nkwekọrịta Nkwekọrịta Mba Nile na 2005, nchịkwa nke mba ụwa na-achọsi ike maka òtù ahụ ike.
10 Buangkok Lee Singapore 539747
Johns Hopkins Singapore International Medical Center (IMC)
Johns Hopkins Singapore na-arụ ọrụ usoro oncology na-agwọ ọrịa na ndị na-ahụ maka ndị mmadụ na ndị na-ahụ maka ọha na eze na mmekọrita na Tan Tock Seng Hospital. IMC nwere ọkachamara n'ịgwọ ọrịa dị elu maka a ọtụtụ ọrịa cancer na nye nlekọta ahụike na ọrụ nlekọta ahụ ike. Ọrụ ha gụnyere nlekọta ndị ọkachamara, chemotherapy, ụlọ ọrụ nlekọta kpụ ọkụ n'ọnụ, ụlọ nyocha, ọrụ ọgwụ, nlekọta ahụike na usoro nlekọta ahụike.
Ụlọ Tan Tock Seng (Ọkwa 1)
KK Hospitallọ Ọgwụ Women'smụaka na Childrenmụaka (KKH)
KK Ụlọ Ọgwụ Ụmụaka na Ụmụaka bụ onye na-elekọta mpaghara Obstetrics, Gynecology, Paediatrics and Neonatology. Taa, ụlọ ọgwụ 830-bed bụ ụlọ ọrụ ntinye aka na-enye ọrụ ndị isi ụlọ iji dozie ọnọdụ dị oke egwu na ụmụ nwanyị na ụmụaka.
Ugwu Elizabeth Hospital
Ugwu Elizabeth na-eje ozi n'Eshia Pacific maka ihe karịrị 30 afọ dịka ụlọ ọrụ ahụ ike, na-enweta ntụkwasị obi nke ndị ọrịa si n'akụkụ nile nke mpaghara ahụ na iji nkà mmụta sayensị dị iche iche na nkà na ụzụ dị elu. Ndị otu ọkachamara nke ndị ọkachamara raara onwe ha nye na ndị ọkachamara dị iche iche na-arụkọ ọrụ, ụlọ ọgwụ abụọ dị na Orchard na Novena enwetawo nkwenye nke ọrụ nlekọta a ma ama nke Joint Commission International (JCI).
3 Ugwu Elizabeth Singapore 228510
National Cancer Center Singapore (NCCS) aghọwo otu n'ime ogige mpaghara maka nnyocha na ọgwụgwọ cancer. Ọ bụ n'ụlọ ka ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị nchọpụta, ndị dọkịta na-awa na ndị ọkà mmụta banyere oncologists na-aga ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ndị ọrịa cancer. Ọrụ NCCS gụnyere Medicinal Palliative, Psychosocial Oncology and Oncologic Imaging.
Tel: + 65 6436 8000 Fax: + 65 6225 6283
Ụlọ Nkà Mba Eze nke Singapore (NDC)
NDCS bụ ụlọ ọrụ pụrụ iche eze na nke kachasị ukwuu na Singapore ma nwee obi ụtọ ịbụ ụlọ ọrụ ọpụrụiche eze mbụ nke Asia ka JCI wee nwee nkwenye na Disemba 2010. Ndị ọrụ NDCS nọ na mpịakọta nkwanye ugwu kwa afọ maka Onyinye Ọrụ Nleta (EXSA), kemgbe 2006 .
NHCS na-akwado onwe ya dị ka ebe nlekọta mba na mpaghara maka ọrịa obi na-arịa ọrịa obi ma raara onwe ha nye inye nlekọta kachasị mma site na isi ogidi isi atọ anyị - Nlekọta Nlekọta, Mmụta na Ọzụzụ, na Nnyocha. Dị ka ebe obibi 185-bed nke ime obodo maka obi ọgwụ na Singapore, NHCS na-enye nchebe zuru oke, igbochi ọgwụgwọ, ọgwụgwọ na ịgwọ ọrịa obi.
Neuroscience Institute (National Neuroscience Institute) (NNI) bụ ụlọ ọrụ ọkachamara nke mba na mpaghara mpaghara maka ndị na-ahụ maka nlekọta na ịgwọ ọrịa ahụ, nakwa maka agụmakwụkwọ na nchọpụta e mere n'ọhịa. NNI na-enye ihe gbasara 20 dị iche iche na nlekọta na-ahụ maka ọrịa na-agwọ ọrịa na-emetụta ụbụrụ, ọkpụkpụ, akwara na akwara.
National Skin Center (NSC)
National Skin Center (NSC) bụ ụlọ ọrụ na-eme ka ndị ọkachamara na-ahụ maka ọgwụ na-ahụ maka ọgwụ na-ahụ maka ọgwụ na-ahụ maka ọgwụ na-ahụ maka ọgwụ na-ahụ maka ọgwụ anụ ahụ. Ha na-ejikwa ibu ọrịa nke ihe dị ka ndị ọrịa 1,000 kwa ụbọchị ma bụrụ ụlọ ọrụ gọọmentị ewezigharị na enyemaka nke National Healthcare Group Pte Ltd (NHG), na-ekerịta ọhụụ NHG nke "dinggbakwunye afọ nke ndụ ahụike".
Tel: (65) 6253 4455 Faksị: (65) 6253 3225
Ụlọ nke Cancer Center (PCC)
Parkway Cancer Center na-enye ndị ọkachamara n'ịgwọ ọrịa kansa, ndị nọọsụ, ndị ndụmọdụ na ndị ọkachamara na-ahụ maka ahụike iji gboo mkpa ndị ọrịa cancer. Ọrụ PCC gụnyere Medical Oncology, Hematology Oncology and Pediatric Hematology and Oncology.
Singapore National Eye Center (SNEC)
Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Anya Mmiri nke Singapore (SNEC) bụ otu n'ime ụlọ ọrụ ahụike ọha na eze maka ịwa ahụ anya na ọgwụgwọ. Kemgbe 1990, SNEC nọ na-enye nlekọta anya nlekọta dị elu maka 60% nke ụlọ ọrụ ọha na eze na ọ na-enye ọhụụ dị iche iche dị iche iche. SNEC nweela ma obodo ma mba ukwu ma kwadoro ebe ya dị ka ụlọ ọrụ ntinye aka nke ụwa maka okwu dị mgbagwoju anya na ebe a na-enye ọzụzụ maka ịkụziri ndị ọkachamara na nchịkwa nke ụwa. Na ogwe aka nyocha ya, Singapore Eye Research Institute (SERI),
E nyere SNEC mma maka 2003 Singapore Awards for achieving excellence in the area of ​​Ophthalmology, na-eme ka Singapore bụrụ ndị a ma ama maka ọrụ ya na ọtụtụ ọganihu, gụnyere ọrụ na Conjunctival na-ebugharị cell transplantation na nsí na Ịwa Ahụ.
Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọgwụ na Singapore
Onye Ọkachamara Ọkachamara Ọkachamara ọkachamara, Dr. Kevin Yip, nwere ihe karịrị afọ 20 na-ahụ maka ịgwọ nsogbu nsogbu a na-enweta site na nsogbu nsogbu, ma ọ bụ na-akpata mmerụ ahụ maka mgbanwe ngbanwe nke nsogbu nsogbu. Jide n'aka na ị ga-enweta ọgwụgwọ ndị ọkachamara nke ga-egbo mkpa gị.
6 Nazọ Napier, # 02-09 Medical Center Gleneagles, Singapore 258499
Thomson Medical Pte. Ltd (TMC) onye bụbu Thomson Medical Center
TMC bụ onye na-ahụ maka ahụike na-ahụ maka nlekọta ha n'ihe gbasara Obstetrics & Gynecology and Paediatrics.
ọrụ ndị nne na nna,
ụlọ ọgwụ (24-Hr Family Clinic and Specialist Outpatient Clinic) na
ndị ọkachamara (nlekọta ahụike na ịwa ahụ, Thomson Dental Center na Thomson Chinese Medicine etc.)
Pịa Ebe a maka nkọwa kọntaktị.
Nzuzo 8606 2 Echiche Taa